Waamicha: “Yaa Oromoo nafxanyaan duutee turte bayyanattee jirti. – Kichuu
HomeNewsWaamicha: “Yaa Oromoo nafxanyaan duutee turte bayyanattee jirti.
#Waamicha: “Yaa Oromoo nafxanyaan duutee turte bayyanattee jirti.
Amma ulaa jijjirama akeessa seentee balbala keessaan cufachuutti jirti. Yeroo akkanaatti isaan keessaa nama qabaachuun faayidaa qaba. Nama kee isaan keessa jiru qalbiin dhaggeefafdhu; waan inni guyyuu dubabtuu fi barreessu qalbeefafdhu!
Yeroon kun yeroo addaa ti. Malaa fi maleenya addaa qabaachuu nu gaafata. Yeroo kana nama kee mooraa diinaa keessa jiru arrabsuun yeroo hin balleessiin; yoo dandeesse itti fayyadami; yoo ta’uu baate, haga inni ofiinuua rgee bahutti obsaan hojii kee qabsoo furgaasu itti fufi.
Yeroon kun maleenya addaa gaafata. Maleenyi kun immoo waan addaa miti; waanuma ati beektu; waanuma abbootiin keenya jaarraa 16ffaa keessa godhanii diina mo’atanii dha. Humna diina keetii ajbeessii qoradhu; nama kee, qabeenya kee, humna kee beekumsa kee walitti qindeeffadhu; yaadaa fi qalbii kee kaayyoo Oromoo irratti jabeessii hojjadhu; karaa hundaan walgurmeessi; walijaari! Humna diinaa caaluuf hojjadhaa!
Yeroo kana nama Oromoo garaa bal’atee diina keessa jiru irraa odeeffannoo fudhadhu; nama diinaaf ergamu ofitti deebisi. Diinni kan Oromoo cabse nama Oromoo fi qabeenya Oromootiin ta’uu hin dagatiin. Diinni yeroo kamiyyuu kan Oromoo dadhabaa fi wallaalaa arguu fedha; Oromoo balleessuu fedha. Kanaaf, Nama Oromoo laafaa, dadhabaa fi wallaalaatti fayyadmee Oromoo balleessuuf halkanii guyyaa hojjata. Kun matumaa, dagatamuu hin qabu; atis yeroo ulaa argatte, namuma diina keessa jirutti fayyadamiitii, diina cabsi.
gama biraan diinni kan Oromoo cabse qabeenya Oromootti fayyadamee ta’uu hubadhu. Kanaaf, qabeenya kee jabeessii eeggadhu; yeroo dandeesse immoo atis qabeenya diinaatti fayyadamiitii, qabsoo kee jabeessi; qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessi.
Mudaaleen hedduu kaleessa nu mudataniiru; garuu hin badne; kufnees hin hafne; bakak yaadne immoo hin geenye. Galma keenya gahuuf, ammaan booda akka haaraatti tarkaanfachuun barbaachisaa dha: jabaa kee kunuunfadhu; laafaa kee jabeeffadhu; wallaalaa kee barsiifadhu; beekaa kee dhaggeefafdhu; amna kee jabeeffadhu; goota haaraa magarfadhu; guddifadhu!!”
AGM: Obboleessi Keenna UAE Jiraatu Kan Mallattoon Koroonaa Irratti Mul’ate Du’aa’ii Nutti Deeffate
Ethiopia: ሰበር መረጃ – 111 ደረሱ | ቤተክርስቲያን ውስጥ ሞ.ተው የተገኙት ሰንበት ተማሪዎች መሆናቸው ታወቀ